ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ ပိုင်ရှင်သစ် ဖြစ်လာကြသူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ ? - xyznews.co
ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ ပိုင်ရှင်သစ် ဖြစ်လာကြသူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ ?
ချဲလ်ဆီး ပိုင်ရှင် ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ်ချ် ဟာ မနေ့က ညနေခင်းပိုင်းမှာ ထုတ်ပြန်ချက် တခုကို ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
လန်ဒန် အခြေစိုက် ချဲလ်ဆီး အသင်းကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ဒီကနေ့ အထိ ပိုင်ဆိုင် လာခဲ့တဲ့ ရုရှ ဘီလီယံနာကြီးဟာ အသင်းရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ကို ချဲလ်ဆီး ပရဟိတ ဖောင်ဒေးရှင်း ထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီကြေညာချက် ဟာ မျှော်လင့်ထားပြီးသား ကိစ္စတခု ဖြစ်ပေမယ့် တကယ်တမ်း ဖြစ်လာချိန် မှာတော့ ပရိသတ်တွေ အကြားမှာ ဂယက်ရိုက်မှု ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ ပါတယ် ။
ရုရှ နိုင်ငံက ယူကရိန်း နိုင်ငံ အတွင်း ကျူးကျော် ဝင်ရောက်လာမှု ဟာ ဘောလုံး လောက ကို အကြီးအကျယ် ထိတ်လန့် စေခဲ့ပြီး ပြင်းထန်တဲ့ ကန့်ကွက် ရှုံ့ချမှုတွေ ပေါ်ပေါက် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဗြိတိန် ကလည်း ယူကရိန်း ဘက်ကနေ ရပ်တည် ခဲ့ပြီး ရုရှ လေကြောင်းလိုင်း ကို ပြည်ဝင်ခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ မှာတော့ ပါလီမန် အတွင်းမှာ အေဘရာမိုဗစ်ချ် အနေနဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်းကို လက်လွှဲ ပြောင်းပေး သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အဆိုပြုချက် ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဥရောပ နိုင်ငံတွေဟာ ရုရှ သမ္မတ ပူတင် နဲ့ ဆက်နွယ်သူတွေကို ပြင်းထန်တဲ့ ဆန်ရှင်ပိတ်ဆို့မှုတွေ ချမှတ်ဖို့ ရှိနေပြီး ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ်ချ် လည်း ပါဝင်နိုင်ဖွယ် ရှိနေပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ဒီလို ဆန်ရှင် ချမှတ်ခံရပါက ချဲလ်ဆီး အသင်းအပေါ် ထိခိုက်မှု မဖြစ်စေဖို့ အတွက် အသင်းရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို လွှဲပြောင်းပေးအပ် သွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
“အနှစ် ၂၀ နီးပါး ရှိတဲ့ ကျွန်တော့ ရဲ့ ချဲလ်ဆီး ပိုင်ရှင် ဘ၀ တလျောက်လုံးမှာ ကျွန်တော့ အနေနဲ့ အသင်းကို စောင့်ရှောက် ကာကွယ်ပေးသူ တယောက် အဖြစ် ရှုမြင် ထားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီကနေ့ အထိ ကျွန်တော်တို့ အောင်မြင်နိုင်သလောက် အောင်မြင် လာတာတွေ ၊ အနာဂါတ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေ အတွက် တာဝန်ယူဆုံးဖြတ်ပေး ရသလို ကျွန်တော်တို့ အသိုင်းအဝိုင်း အပေါ်လည်း ကောင်းတဲ့ ဘက်ကနေ ပါဝင် နိုင်ဖို့ ကျွန်တော် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်”
“အသင်းအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ်လို့ ထင်တဲ့ အရာတိုင်းကိုလည်း နှလုံးသားနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီး လုပ်ဆောင် ခဲ့တာပါ ။ ဒီအရာတွေ ကို ကျွန်တော် အမြဲ တန်ဖိုးထား နေမှာပါ ။
ဒါကြောင့်ပဲ ချဲလ်ဆီး ပရဟိတ ဖောင်ဒေးရှင်း ကို အသင်းရဲ့ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်သူတွေ အဖြစ် ဒီကနေ့မှာ ကျွန်တော် က ယုံကြည်စွာနဲ့ အပ်နှံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါပဲ။
လက်ရှိ အခြေအနေမှာ ဒါဟာ ကလပ် အသင်းက ကစားသမားတွေ ၊ ဝန်ထမ်းတွေ နဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက် အကောင်းဆုံး အရာ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်း ကျွန်တော် ယုံကြည်ထားပါတယ်” လို့ အေဘရာမိုဗစ် က ချဲလ်ဆီး အသင်းကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်ကြောင်း ယမန်နေ့ ညနေ့ပိုင်းက တရားဝင် ထုတ်ပြန် ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ပရဟိတ ဖောင်ဒေးရှင်းကို အဓိက ကိုင်တွယ် စီမံနေကြတဲ့ သူတွေကတော့ –
ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ အကြီးအကဲ တဦး ဖြစ်သလို အသင်းရဲ့ မှတ်တမ်းတွေ အရ ၁၉၈၃ ခုနှစ် ကတည်းက ချဲလ်ဆီး ပရိသတ် ဖြစ်လာပြီး ၁၉၉၁ ခုနှစ်က စလို့ တရာသီစာ လက်မှတ်ဝယ်ယူသူ ဖြစ်လာခဲ့သူ တယောက် ဖြစ်ပါတယ် ။
ဘရုစ်ဘက် ဟာ ချဲလ်ဆီး ကို အေဘရာမိုဗစ်ချ် ဝယ်ယူစဉ်က အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီး လိမိတက် ရဲ့ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အမျိုးသမီး အသင်းရဲ့ မန်နေဂျာ အဖြစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကတည်းက လုပ်ကိုင် လာသူ ဖြစ်ပါတယ် ။
သူမ လက်ထက်မှာ ချဲလ်ဆီး လေဒီတွေဟာ အမျိုးသမီး စူပါလိဂ် ချန်ပီယံ ၄ ကြိမ် ၊ အမျိုးသမီး FA Cup ၃ ကြိမ် နဲ့ အမျိုးသမီး လိဂ် ဖလား ၂ ကြိမ်တို့ကို ရယူနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒဗိုင်း ကတော့ ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ အားကစားဆိုင်ရာ အကျိုးဆောင် ( ရှေ့နေ ) ဖြစ်ပါတယ် ။
ပိုဝါ ဟာ Kick it Out ရဲ့ အမှုဆောင်ချုပ်ဟောင်း တယောက် ဖြစ်ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး ကိစ္စတွေကို နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ပါဝင် လုပ်ဆောင် လာခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး အသင်းရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး ဒါရိုက်တာ အဖြစ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ကနေ စတင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် လာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ။
Previous Article ယူနိုက်တက် ဘယ်နေရာတွေမှာ ညံ့သလဲဆိုတာ သိပြီးရင်း သိခဲ့ရတဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေ ကောင်းပြီး ဘယ်သူတွေ ညံ့ခဲ့ကြသလဲ…
Next Article ယူကရိန်း ဘက်ကရပ်တဲ့ ဘောလုံးကမ္ဘာကြီး ၊ အနိုင်မလိုချင်ကြတဲ့ မီလန်သားများ ၊ ဦးဆောင်သူတွေရဲ့ ပွတ်ကာသီကာ နိုင်ပွဲတွေနဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ